ဇာတ်တူသားချိဖတို့ သိုင်းကျင့်တော့မယ့်အခါ | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေးထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ်
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် ဇာတ်တူသားချိဖတို့ သိုင်းကျင့်တော့မယ့်အခါ
ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ ဒချိကြတဲ့အခါမျိုးမှာ လိင်ကူးစက်ရောဂါတွေမရဖို့၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရမသွားဖို့ အစရှိတဲ့ သတိထားရမယ့်အချက်တွေကို လူတော်တော်များများက သိကြပါတယ်။
ဒီလို သမားရိုးကျ ဖိုနဲ့မ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးနဲ့မတူတဲ့ တမူကွဲပြားတာတစ်ခုကတော့ ဇာတ်တူသားချိဖတွေအချင်းချင်း သိုင်းကျင့်ကြတဲ့ကိစ္စပါပဲ။
ဒီတော့ သိလိုရာမေးကနေ ဇာတ်တူသားချိဖတွေအချင်းချင်း သိုင်းကျင့်ဖို့ စိတ်ကူးနေပြီဆိုရင်တော့ သိထားသင့်တာတွေကို လိုရင်းတိုရှင်း ပြောသွားပါ့မယ်။
ပထမဦးဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ချိဖတို့ နှစ်ဦးသား တုတ်သိုင်းကျင့်တော့မယ့်အချိန်တိုင်း အကာအကွယ်ကွန်ဒုံးကို မသုံးမဖြစ်သုံးပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ မိန်းမနဲ့ယောကျာ်းစုံတွဲတွေအတွက် ဒချိချိန်မှာ ကွန်ဒုံးသုံးကြတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ရမသွားဖို့ဆိုပေမယ့် ကျား ကျားချင်း တုတ် တုတ်ချင်းမို့လို့ ဗိုက်ကြီးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး… ဒါကြောင့် သုံးစရာမလိုဘူးလို့ တွေးနေရင်တော့ ချိဖတို့ အမှားကြီး မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေ အတူနေချိန်မှာ ကွန်ဒုံးသုံးရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်က လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ပါပဲ။ ဒီတော့ ကူးစက်ရောဂါကင်းကင်းနဲ့ သိုင်းကောင်းကောင်းကျင့်နိုင်ဖို့ အလွှာခြားကြစို့ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို မမေ့ကြပါနဲ့ ချိဖတို့!
လာပါပြီ! ဒုတိယအချက်…. ဇာတ်တူသားတွေ သိုင်းကျင့်ပြီဆိုမှတော့ အဓိက သိုင်းကွက်ကြီး ၂ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ သိုင်းကွက်ရယ်၊ စအိုနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ သိုင်းကွက်ရယ်ပါ… ဒီနှစ်မျိုးမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ သိုင်းချချ အန္တရာယ်တွေ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ် အစရှိတဲ့ STIs တွေ သာမက တခြားသော လိင်တံအရေပြားကနေ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ပါးစပ်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စအိုနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သိုင်းကွက်ကိုပဲ ချချ ကွန်ဒုံးစွတ်ပြီးမှ သိုင်းကျင့်ကြဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကွန်ဒုံးနဲ့ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပေမယ့် ရောဂါရမှာနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ပါမွှားပါပဲ။
နောက်ဆုံးအချက်… ဒါကတော့ အရုပ်ကြိုက်တတ်တဲ့ ချိဖစုံတွဲတွေ အတွက်ပါ… လိင်ထောက်ကူပစ္စည်းအရုပ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးတဲ့သူနည်းမယ်ဆိုပေမယ့် တခါတလေ လိင်ဆန္ဒခံစားမှုကောင်းစေဖို့ သုံးတတ်ကြတဲ့ သူတွေလဲ အနည်းအများ ရှိကြပါတယ်။ လိင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီးရင် ဒီအရုပ်တွေမှာ ရောဂါပိုးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကပ်ငြိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရုပ်တွေကို မသန့်ရှင်းပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ သုံးမိနေမယ်ဆိုရင်တော့ လိင်ကူးစက်ရောဂါတွေ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လိင်အရုပ်တွေကို သုံးတတ်သူ ချိဖတို့ဆိုရင် တစ်ခါသုံးပြီးတိုင်း အရက်ပြန်နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သန့်စင်ပြီးတော့မှ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သုံးသင့်ပါတယ်။ အဲ ကွန်ဒုံးစွတ်ပြီး သုံးလို့ ရနိုင်တဲ့ အရုပ်မျိုးဆိုရင် ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီးသာ သုံးဖို့ နောက်တစ်ကြိမ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ…
သမားရိုးကျ ဖိုနဲ့မ ဒချိတာနဲ့မတူဘဲ ချိဖတို့ သိုင်းချရင် တခါတလေ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲကတော့ ရှောရှောရှုရှုမဖြစ်တဲ့ အကျပ်အတည်းပါပဲ။ ဒီတော့ ဇာတ်တူသားတွေချည်းပဲ ရွေးစားချင်တဲ့ ချိဖတွေကတော့ အကျပ်အတည်းမှန်သမျှကို ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင် ချောဆီ ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်လေးလိုပါတယ်။
ဒီတော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ၃ ချက်စလုံးမှာ မပါမဖြစ်ပါနေတဲ့ ဇာတ်လိုက် ကွန်ဒုံး နဲ့အတူ ချောဆီ လေးပါ ပါရင် နှစ်ဦးကြားက အနှိုင်းအဆမဲ့ အချစ်ကို ပုံဖော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် KISS Duet ကွန်ဒုံးလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ KISS Duet ကွန်ဒုံးက ရေဓာတ်ကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချောဆီ အထုပ်လေးတွေ ပါတဲ့အတွက် ချောဆီကို တကူးတက ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာများလိုသေးလဲ KISS Duet နဲ့ပဲ ချိဖတို့ရဲ့ အချစ်ညလေးကို ပုံဖော်လိုက်တော့ဗျို့…
KISS DUET ကွန်ဒုံး ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
သာယာမှုအထွတ်အထိပ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ သော့ချက်တွေကဘာလဲ? သင့်ရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေလိုမှုတွေကိုဖြေဆိုဖို့ ဒေါက်တာဒိနဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့က ဖြေဆိုဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်
© ၂၀၁၈ ဒီကေတီ မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီးဖြစ်သည်။ သိလိုရာမေးသည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပညာပေးစာမျက်နှာသက်သက်ဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှုဆိုင်ရာ ညွှန်းဆိုခြင်းများ မပြုပါ။
သိချင်တာကို အခုပဲမေးလိုက်ပါ။ သင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ Gmail ကို အကြောင်းပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။